Turkiga oo xabsiga dhigay suxufiyad lagu eedeeyay inay 'aflagaadeysay' Erdogan | Arrimaha Bulshada
Home Beauty & Ladies BODY & MIND News Turkiga oo xabsiga dhigay suxufiyad lagu eedeeyay inay 'aflagaadeysay' Erdogan
Turkiga oo xabsiga dhigay suxufiyad lagu eedeeyay inay 'aflagaadeysay' Erdogan
Sunday, January 23, 2022 Beauty & Ladies , BODY & MIND , News
Bulsha:- Booliska Turkiga ayaa xabsiga dhigay weriye caan ah oo ka tirsan Telefishinka, kadib hadal ay hawada ka jeedisay oo ku saabsanaa Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, sida uu Sabtidii sheegay Qareenkeeda.
Booliiska ayaa Sedef Kabas ku xiray gurigeeda labadii duhurnimo ee Sabtidii, saacado uun ka dib markii ay aragtideeda ku faafisay barteeda Twitterka oo ay kala socdaan 900,000 oo taageereyaasheeda ah.
Suxufiyaddan ayaa si rasmi ah loo xiray kadib markii ay ka soo muuqatay maxkamadda.
Danbiga aflagaaddo madaxweyne ayaa dalka Turkey waxaa lagu muteystaa xabsi hal ilaa afar sanadood ah.
"Wariye ku sheeggan wuxuu si bareer ah telefeshinka uga caayay madaxweynaheenna. Malahan hadaf aan aheyn faafinta nacaybka," ayuu soo dhigay bartiisa Twitter afhayeenka Erdogan, Fahrettin Altun.
Ururka suxufiyiinta Turkiga ayaa xariga Kabas ku tilmaamay "weerar halis ah oo ka dhan ah xoriyatul qawlka" waxaana kooxaha xuquuqul insaanka ay si joogta ah ugu eedeeyaan Turkiga inuu wiiqayo xorriyada warbaahinta, isagoo xiraya suxufiyiinta iyo xarumaha warbaahineed ee dhaliila, gaar ahaan tan iyo markii Erdogan uu ka badbaaday afgambigii dhicisoobay ee July 2016.